Badiucao, mpanao sariitatra politika, nanafoana tampoka ny fampirantiany tao Hong Kong — avy eo tsy nandrenesam-peo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2018 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, Português, English, русский, Français, عربي, English
“Gongle,” an'i Badiucao, dua kilalaonteny fanehoankevitra momba ny ezaky ny Google hiverina hiditra ao Shina indray miaraka amin'ny fitaovana fanivànana. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Voatery nanafoana ny fampirantiana voalohany saka hataony tao Hong Kong ilay mpanao sariitatra politika, Badiucao, noho ireo fandrahonana avy amin'ny governemanta foibe ao Shina.
Fampirantiana efa voalahatra hatomboka ny 3 Novambra teo ho toy ny hetsika sangany mandritra ny Herinandron'ny Fahalalahana Maneho Hevitra ao Hong Kong. Ny 2 Novambra, nambaran'ireo mpikarakara fa nofoanan-dry zareo ilay fampirantiana:
Malahelo izahay manambara fa noho ny resaka filaminana dia nofoanana ilay fampirantiana ” Gongle” tokony hataon'ilay artista shinoa Badiucao
Fanapahankevitra noraisina taorian'ny fandrahonana avy amin'ireo manampahefana shinoa nanjo an'ilay mpanakanto. Na dia manome lanja mafonja ny fahalalahana maneho hevitra aza ny mpikarakara, ny fitoniana sy fahaleman'ireo mpiaramiasa aminay no mbola zavadehibe kokoa.
Tao amin'ny Twitter i Badiucao no nanefy ny lazany, nanao sariitatra politika izay manao fanamby amin'ny sivana sy ny jadona ao Shina. Efa nasongadin'ny The New York Times sy ny The Guardian ny asa vitan'ilay artista Shinoa-Aostraliàna .
Toy ny sedra atao hijerena ny fetran'ny fahalalahana maneho hevitra ao Hong Kong no fahitàn'ny maro an'ilay zavatra mitranga, Hong Kong izay misitraka fahalalahana betsaka kokoa raha ampitahaina amin'ny ao amin'ny tanibe Shina, eo ambanin'ilay fotokevitra fantatra amin'ny hoe “Firenena Iray, Rafitra Roa.” Tato anatin'ny taona vitsivitsy, tamin-kery bebe kokoa no nanamafisan'i Beijing ny dindony ao Hong Kong. Niatrika famoretana mafaitra ireo izay manohana ny hanànana zo demaokratika bebe kokoa, toy ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara na fahaleovantena.
Tsy nofaritan'ireo mpikarakara izay natioran'ireo fandrahonana azon'ilay mpanakanto. Amin'ny ankapobeny dia olona mivantambantana izy ety anaty tambajotra, saingy tsy nanavao intsony ny Twitter-ny hatramin'ny 1 Novambra.
Tsy nihevitra ny hisidina ho any Hong Kong i Baduicao, fa noheverina handray anjara taminà resaka an-databatra tamin'ny alàlan'ny fivoriana ifanaovana amin'ny lahatsary (vidéoconférence) miaraka amin'i Joshua Wong, mpikatroka mpandàla ny demaokrasia, sy ireo mpanakanto avy ao Hong Kong Sampson Wong sy Oscar Ho, ary ireo Rosiàna mpanohitra sy mpiangaly ny punk-rock Olga Kuracheva sy Veronika Nikulshina izay samy mpikambana ao anatin'ny tarika Pussy Riot.
Na dia foana aza ilay fampirantiana, nanapaka hevitra ireo mpandray anjara amin'ilay resaka an-databatra ny hanohy sy hikarakara adihevitra momba ny zavakanto sy ny fahalalahana maneho hevitra, tao aminà efitra kely iray. Nalefan'izy ireo mivantana tao amin'ny Facebook ilay hetsika.
Cedric Alviani, Olga Kuracheva, Veronika Nikulshina sy Joshua Wong. Sary avy amin'ny Hong Kong Free Press. Nahazoana alàlana.
Notaterin'ny Stand News, ilay media shinoa tsy mikatsaka tombony ara-barotra ny momba ilay resaka an-databatra izay nanehoan'i Sampson Wong ny ahiahiny momba ny fiarovana an'i Badiucao. Nohazavainy fa niezaka izy ny hifandray tamin'ilay mpanakanto nanomboka tamin'ny 2 Novambra, saingy tsy hay izay misy an'i Badiucao. Sedra ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ao Hong Kong no nahitàn'i Wong an'ilay fampirantiana. Nandiso fanantenana azy ny nahita hoe tsy betsaka ny olona no sahy midradradradra manohitra ny fandrahonana ataon'i Beijing.
Tohina tamin'ilay fanafoanana i Oscar Ho, mpitsikera aza-javakanto sady manampahaizana avy ao an-toerana. Notsipihany fa tsy mazava ireo sivana fanaon'i Beijing ao Hong Kong. Betsaka no niandrandra hoe “tokony ho fantatr” ireo ao Hong Kong ny fetran'ny tsipika mena, nefa zara raha misy torolàlana mifandraika amin'izany manazava ny azo sy tsy azo atao. Naneho faniriana izy ho an'ireo mponina mba hampiseho fahaizamamorona bebe kokoa amin'ny ady atao hanoherana ny sivana.
Nilaza i Joshua Wong fa naniry ny hisian'ny fifanakalozana misimisy kokoa amin'ny fiarahamonina sivily erantany, ao anatin'ny fanantenana hoe mba ho afaka manampy ireo vondrona ao an-toerana hiaro ny demaokrasia sy ny fahalalahana ireny tambajotra iraisampirenena ireny
Notsindrian'i Olga Kuracheva mpikambana avy amin'ny Pussy Riot tsara ny maha-zavadehibe ny fanohanan'ny vahoaka sy ny firaisankina ho an'ny olona toa an'i Badiucao:
Tena malahelo tokoa izahay mahafantatra hoe miharatsy hatrany ny toedraharaha eto. Heveriko fa tena zavadehibe ny fisianay eto ankehitriny mba haneho fotsiny ny firaisankinanay… Te-hanoro hevitra ny olona aho mba tsy ho raiki-tahotra, satria tsy misy lanjany raha izay feo tokana monja…fa ho re mafy ny feon'ny firaisankina (Fitanisàna notsongaina avy amin'ny tatitry ny Hong Kong Free Press)
Kuracheva sy Nikulshina dia roa tamin'ireo efatra mpikambana avy amin'ny Pussy Riot nifonja 15 andro taorian'ny nanaovany hetsipanoherana an'ilay mpitarika rosiàna Vladimir Putin nandritra ny lalao famaranana ny Fiadiana Tompondaka Erantany ho an'ny lalao kitra natao tao Maosko amin'ny Jolay 2018. Nolazain-dry zareo fa “fomba fanao mahazatra” any Rosia ny fandrahonana atao amin'ny fampirantiana sy hetsika taokanto politika.
Notsipihan'ì Cedric Alviani avy amin'ny Reporters Without Borders fa ny toerana misy an'i Hong Kong ao anatin'ny tondro momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety fanaon'ny RSF dia faha-18 tamin'ny 2002 ary nidina ho any amin'ny 70 ny taona 2018. Ninoany fa ny fomba tsara indrindra hanohanana ireo mpankanto iharan'ny fandrahonana dia ny fanapariahana ny asan'izy ireny hameno ny habaka rehefa ahafahana manao izany.